कला/साहित्य::Nepal's Online News Portal
राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको अवस्था झन् चिन्ताजनक,उडाईयो दिल्ली,केछ अवस्था पढ्नुहोस
काठमाडौं, ९ जेठ । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको रोग पहिचानका लागि आज (बुधबार) नयाँ दिल्ली लगिएको छ। उनको शरीरको कुन भागबाट आन्तरिक रक्तश्राप भइरहेको छ भन्‍ने पहिचान गर्न उनलाई दिल्लीको मेदान्त अस्पतालमा लगिएको हो। निन्द्रा नलाग्ने,...
डा. उपेन्द्र देवकोटाप्रति जनता उर्लिए !एति सम्म मार्मिक गजलमा देवकोटालाई समर्पित
गजल ज्ञानमा बिजयी उ* बिज्ञानसँग हारेको छ ! आफ्नो अथाह पीडालाइ हाँसोसँग टारेको छ !! कैयौको मृत्युसँग लडिदिने एउटा मान्छे ! मृत्युलेनै सत्रु ठानी आफ्नो जालमा पारेको छ !! उस्को पीडा बाड्न मिले, एक-एक तोला बिक्थ्यो ! भावनाले के...
रातको १२ बजे ठमेलमा बेचिएको म पुरुष र खरिद गर्ने उनि-कमल सरगम
कमल सरगम लाखौको सपनाको सहर काठमाण्डौ,करोडौको परिवार धान्ने सहर काठमाण्डौ,हजारौको परिवार तहस नहस पाने सहर काठमाण्डौ,मेरो जवानी मासिएको सहर काठमाण्डौ।यही काठमाण्डौ जहाँ नुन देखि सुन्न सम्म सजिलै पाउन सक्छौ।यही काठमाण्डौ जहाँ पानी देखि जवानी सम्म...
यो दिल मा आगो लगायौ तिमीले-सरोज अधिकारी
यो दिल मा आगो लगायौ तिमीले मुटु भित्र छुरा चलायौ तिमीले। बुझिनौ तिमीले मेरो चोखो माया लाई माया को मुहानै सुकायौ तिमीले। माया गर्नु पाप हो भनी गलत सोच्यौ तिमीले ब्यथैमा...
मासिक ५ सय तलबबाट सुरु भएको मेरो पत्रकारिता:कमल सरगम
कमल सरगम काठमाण्डौ। जिन्दगी एउटा अविरल सागर हो जहाँ पौडिरहेका माछाहरु,बग्दै गरेका छालहरू जस्तै संघर्ष गरिरहेको कुनै व्यक्तिको जिन्दगी, सबैको एकै चाहना म गन्तव्यमा पुग्न सकौ,हो यही गन्तब्य भित्रका पाइलाहरुको बिचमा आएका बादा-अर्चन संग जुध्न अनेकौ...
रहेनन्, कथाकार ब्राजाकी,उनि र उनको ब्राजाकीको जिन्दगी……..
काठमाडौँ माघ २० — उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आएर कला विषय पढिरहेका बेला दुर्गा बरालले चेतमानलाई भेटेका रहेछन् । ‘काठमाडौंमा पनि अचानक भेट भयो । उनले भने– मैले त नाम चेन्ज गरेँ नि । म अब कुनै...
मलाई नेपाल आउने पहिलो मिति दिनुभएको हो : ओशो
ओशोले मलाई नेपाल आउने पहिलो मिति दिनुभएको थियो, सन् १९७० मा। म त्यतिबेला विहारको पटना विश्वविद्यालयमा इञ्जिनियरिङ पढ्दै थिएँ। मैले उहाँलाई नेपाल आउन आमन्त्रण गरेको थिएँ। उहाँले पनि मार्च १९ देखि २२ सम्म ३...
“कैली” म केटि तर बिहे गर्छौ म संग भनि एउटा केटिले नै भन्यो : केटि संग केटिनै कहिँ बिहे गर्छन र मेरो जवाफ (एक कथा)
रातको १ बजे हामी थानकोट ओर्लियौं । काठमाडौं आइपुगियो भन्दै म रमाएँ । चारैतिर झिलिमिली बत्ती बलेको, बाटो पनि उज्यालो थ्यो । मलाई मध्यरात जस्तो भानै भएन । दिदीको साथ र बच्चाको तोते बोलीले...
सुन्नुहोस् त, यो रत्नपार्क र फनपार्क भनेको एउटौ हो ?
उनलाई पिपुल यु मे नो मा देखाएको हैन्, उसो त म देखाए जतिलाई एड गर्छु भन्न खोजेको पनि होईन्, साथीको टेग्ड पोष्टबाट मैले एड गरेको थिए रुविलाई, मंगोलियन आकारको ठूलो अनुहार, आँखा धेरै डुबेका...